CC Shakuur: “Shacabka ha difaacdeen xuquuqdoda Garsoorka iyo Baarlamaankuba howshoodii waa gabeene” – Hornafrik Media Network
CC Shakuur: “Shacabka ha difaacdeen xuquuqdoda Garsoorka iyo Baarlamaankuba howshoodii waa gabeene”
By Liibaan Nuur	 Last updated Dec 18, 2019
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in iyadoo ku xadgudbeysa dastuur dalka ay xoriyadiisa si sharci darro ah uga qaaday Yuusuf Xasan Mursal oo ahaa guddoomiyaha Xisbiga Amniga iyo Cadaallada oo ah xisbi uu aas aasay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu-Mansuur.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in eeda kaliya ee Yuusuf loo haysto ay tahay inuu ku lug lahaa abaabulka xuska sanad guuradii 1aad ee xasuuqii Baydhabo ka dhacay, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inuu dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo uu ka dalbanayo inay xoriyadiisa dib u siiso Yuusuf Xasan, isagoo ku eedeeyey ku tumasho dastuur iyo ku takrifalka awoodda dowladnimo.
Ugu danbeyntii Cabriraxmaan ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay xuquuqdooda difaacdaan, maadamaa sida uu sheegay hay’adahii kale ee dastuuriga ahaa sida Baarlamaanka iyo Garsoorkuba ay hawshoodii gabeen.
Hadalkaan ayuu siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ka jeediyey goob lagu xusayey dhalin yaro lagu dilay weerar ay ciidamada dowladdu labo sano ka hor ku qaadeen xarunta Xisbiga uu hoggaamiyo ee Wadajir, kuwaas oo uu sheegay inaysan wali cadaalad helin.
In ka badan 20 ruux oo lagu dilay duqeymo ka dhacay dalka Suuriya.